‘हेल्लो सरकार, हामीले ट्याक्सी चलायौं !’ - Korea Nepal
Home समाचार ‘हेल्लो सरकार, हामीले ट्याक्सी चलायौं !’
७ असार २०७७, आईतवार १४:२९
काठमाडौं । धादिङका टंकबहादुर श्रेष्ठले भाडाको ट्याक्सी चलाउन थालेको २० वर्ष भयो । परिवारको जीविकोपार्जनका लागि एउटै मात्र आम्दानीको स्रोत रहेको उनको ट्याक्सी लकडाउनका कारण लामो समय थन्कियो ।
सरकारले जेठ ३२ देखि लकडाउन खुकुलो पारे पनि अहिलेसम्म भाडाका ट्याक्सी चलाउन अनुमति दिएको छैन । तर सरकारले अनुमति नदिएर के भो ? जनताका अगाडि सरकार यति निरीह सावित भइसकेको छ कि उसले जारी गरेको आदेश सडकमा पालना हुन छाडिसकेको छ । न जोर-बिजोर, न मोटरसाइकलमा दुईजना चढ्न नपाइने आदेश !
झण्डै तीन महिना कष्टकर बसाइँ र उधारो मागेर परिवार पालेपछि सरकारले अनुमति नदिए पनि असार एक १ गतेदेखि ट‌ंकबहादुरले आजित भएर ट्याक्सी चलाउन थालेका छन् । ‘कोरोनाको जोखिम छ थाहा छ, तर रोगभन्दा भोकले बाँच्नुपर्ने अवस्था आयो, मैले ट्याक्सी चलाउन थालेँ,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।
अरू सबै व्यवसाय खुल्ने तर सर्वसाधारण आवात-जावतका लागि ट्याक्सी नखुल्ला सर्वसाधारण पनि मारमा परेको उनले सुनाए । परिवार पाल्नकै लागि लुकिछिपी ट्याक्सी चलाएको भए पनि एक/ दुईपटक त प्रहरीले समातेर दिनभरि थन्क्याइदिएको उनले सुनाए ।
Previous articleसलमान भन्छन्, ‘सुशान्तको परिवार र फ्यानलाई साथ दिनुस्’
Next articleयसकारण गर्नुपर्छ योग [टिप्स]